Qala Izinsizakusebenza zebhizinisi, Incorporate, Inc.
Zonke izinsiza ozidingayo ukuqala ibhizinisi elisha. Funda ngokufaka, ukwakheka kwe-LLC nokuthi ungakufaka kanjani manjalo usebenzisa inkampani endala yamashalofu. Thola ulwazi olusebenzayo ngezinhlobo zebhizinisi, izinzuzo zalo nokuthi lusebenza kanjani futhi lusebenze ibhizinisi elilingene ukwandisa isivikelo sesikweletu. Sakha izinkampani kuwo wonke amazwe ase-50 US, eCanada nakwamanye amazwe amaningi. Ezinye zezithandwa kakhulu yilezi Delaware LLC futhi I-Wyoming LLC.
Hlanganisa noma Yakha i-LLC manje, Shayela 1-888-444-4812 Ulwazi lwebhizinisi lokuqalisa nezinsizakalo
Inkampani enesikweletu esilinganiselwe, noma LLC isakhiwo senhlangano yebhizinisi… (sicela uchofoze isixhumanisi)
The Inhlangano yindlela yokwakheka kwebhizinisi ebizwa kanjalo ngoba… (sicela uchofoze isixhumanisi)
Lapho ubhalisa inkampani, C inhlangano noma i-C corp yiyona evame kakhulu… (sicela uchofoze isixhumanisi)
Izinhlangano ezingenzi-nzuzo zakheka ukwenza imisebenzi futhi… (sicela uchofoze isixhumanisi)
A ukubambisana okulinganiselwe (LP) yakhiwe ngokuhlanganisa okukodwa noma ngaphezulu… (sicela uchofoze isixhumanisi)
An I-LLLP Ukubambisana Okulinganiselwe Kwezikweletu. Nazi izinzuzo ezimbili ezinkulu zaleli bhizinisi, noma isakhiwo senhlangano yebhizinisi esi… (sicela uchofoze isixhumanisi)
Izinkampani Zeshelf - Izinkampani Ald ezindala kanye nama-LLC Athengiswayo
Ukuqhathanisa Izinhlobo zebhizinisi
Faka ngaphakathi eCalifornia
I-Limited Liability Company (LLC)
Ungayiqala Kanjani Inhlangano / Inhlangano engenzi inzuzo - Izincazelo Nezibonelo
Ingabe Kufanele Ngihlanganyele?
Izinkampani Ezigugile Zeshelf
Ngubani Okufanele Ukuhlanganiswe?